IBárbara squall: izici, imimoya, imvula kanye nezixwayiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 18/10/2021 16:00 | Izimo zezulu
La squall uBarbara Kwakuyisibili igama lesizini ka-2020-2021. Igama elihlongozwa yi-state meteorological agency (AEMET) ngeSonto, ngo-Okthoba 18 ngo-09: 30. Umsuka wawo ubangelwe ukukhishwa kwezixwayiso ezithile zomoya ovunguzayo ovela ezingeni lewolintshi ovumeleke ukuba ungo-20 kusukela ngo-16: 00. Yize ngesikhathi sokuqokwa kwakhe ebengazi ukuthi kwenzekeni, emahoreni okugcina oMsombuluko uqale ukuziqeqesha.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nesiphepho uBarbara, ukuthi imvula ishiye malini, ukuqubuka komoya, njll.
1 Squall uBarbara
2 Ukuqhephuka komoya nemvula
3 Izixwayiso nezixwayiso zesiphepho uBarbara
Ngesikhathi sama-20 nasekuqaleni kwama-21, isiphepho uBarbara wawela iPeninsula esuka eningizimu-ntshonalanga waya enyakatho-mpumalanga, eshiya imvula enkulu, ikakhulukazi engxenyeni esentshonalanga yohlelo oluphakathi, nemimoya enamandla kakhulu, ngisho neziphepho, izindawo ezinezintaba zaseNyakatho. Kutholakale ukuthi emaphethelweni aseningizimu ye-squall ebanzi ehlanganisa kakhulu i-North Atlantic Ocean umfudlana omanzi oshisayo wawondliwa. Yilapha lapho kwakhiwa khona i-vortex yesibili, okwathi lapho ihlangana ne-polar jet yamazinga aphezulu, yabangela isiphepho uBarbara.
Ngo-00 UTC ngo-Okthoba 20, isikhungo saseBarbara sasitholakala ngasentshonalanga neMadeira. Ngosuku olulandelayo yahamba ngokushesha ohlangothini olusenyakatho nentshonalanga. Ngo-12 emini babeseLisbon kwathi ngo-00 ngo-Okthoba 21 base baseCantabrian Sea. Into ejwayelekile esivunguvungwini ukuthi isikhungo sizoba nengcindezi ephansi yomkhathi. Kulokhu, noma ingcindezi maphakathi nayo ibingephansi kakhulu, cishe ngo-990hPa, bekuyisikhathi sakhe sokujula. I-gradient yengcindezi eqinile eyayisebenza ngenkathi idlula enhlonhlweni ngemuva kwesikhungo kanye nengcindezi ephezulu eyayiseYurophu naseMedithera yikho okwadala imimoya enamandla ngamandla amakhulu.
Ukuqhephuka komoya nemvula
Ukuvunguza komoya onamandla bekuyiziphepho ngisho ebhendi ebisuka eHuelva iye enkabeni yePyrenees. Yonke imikhakha ehambisana nesiphepho uBarbara inqamula yonke inhlonhlo eseningizimu-ntshonalanga iye ohlangothini olusenyakatho-ntshonalanga. Bekuhamba kancane empumalanga. Ngakho-ke, kube nokugeleza okuqhubekayo futhi okukhulu kusuka eningizimu-ntshonalanga obekuthanda ukuqoqwa kwemvula enkulu. Imithambeka eseningizimu yezinhlelo zezintaba ezisentshonalanga lapho kulapho kwaba khona imvula enkulu kakhulu. Isilinganiselo senzeke ohlelweni oluphakathi. Ngenxa yemvula ephezulu, kufika kuma-300 mm ngamahora angama-24 kuphela. Endaweni yeMedithera yeziQhingi zeBalearic, imvula yayingenalutho.
Ukweqisa kobuso obubandayo kukhuluma kuzo zonke iziQhingi zaseCanary ntambama ngo-Okthoba 20. E-Canary Islands imvula enkulu nayo yasala, yize kunamanani aphansi kakhulu kunalawo aqoshwe enhlonhlweni. Ngesikhathi sama-21, uBarbara uqhubekile nokuhambela phezulu ngasenyakatho, waze wahlangana, ntambama yalolo suku, nesikhungo esikhulu sesiphepho esikhulu se-Atlantic phakathi kweGreat Britain neNorth Sea, ukuze kamuva aye eScandinavia. Yize eSpain esenhlonipheni ingcindezi ephansi nemvula nomoya kuqhubekile, kungasenamandla kangako, Kungashiwo ukuthi imiphumela ehambisana ngqo noBarbara yaphela ngezikhathi zokuqala zomhlaka-21.
Imvula engxenyeni esentshonalanga yesistimu emaphakathi ibinamandla kakhulu futhi ihlala isikhathi eside. Uma kubhekwa isikhathi esivamile sesimo sezulu samahora angu-7 kuya kwangu-7, ama-301 mm aqoshwe ePuerto El Pico (ilavila) avela kuma-20 noma ama-312 mm, okuyisona esikhulu kunazo zonke ochungechungeni lwezinkathi zonyaka. IGarganta la Olla, iHervás, iPiornal, iMadrigal de la Vera, iHoyos, iTornavacas neValverde del Fresno eCáceres abagcini nje ngokwaphula irekhodi lemvula enqwabelene kakhulu ngo-Okthoba inyanga engu-1, kepha futhi cishe bonke.
Irekhodi lesikhathi sonke liphindwe kabili. Ngaphezu kwalokho, kwakunezihlambi ezinkulu, njengamalitha angama-21 ngemizuzu eyi-10 kuphela e-El Paso (La Palma), ayi-12 e-Alosno (eHuelva) nangu-11 eFuente de Cantos (Badajoz).
Izixwayiso nezixwayiso zesiphepho uBarbara
Kukhishwe isexwayiso esiwolintshi izivunguvungu ezinesivinini somoya ezingaphezu kuka-90 noma u-110 km / h. Ngokuya ngesifunda, isikhathi sesiphepho besiphakathi kuka-Okthoba 20 no-21. Ihlanganisa cishe zonke izindawo ezinezintaba zengxenye esenyakatho yenhlonhlo, kuhlanganise neSierra de Toledo. Uhlelo lonke olumaphakathi, iSierra de Tabria, uhlelo lwase-Iberia iBurgos, iSoria neLa Rioja, iPyrenees esentshonalanga nasenkabeni, isikhungo seNavarra kanye nomthambeka waseCantabrian, kanye nezwe lonke laseBasque (ngaphandle kogu).
Izinhlelo ezimaphakathi zeSalamanca, Cáceres, Ávila, Segovia neMadrid, kanye nezintaba zaseCantabrian zaseLeón, Zamora nasePalencia futhi iningi lazo, emahoreni ayi-12 laqoqa imvula engaphezu kuka-80 mm. Izinga lokuxwayisa ngokusawolintshi nalo likhishwe eHuelva, kwabuye kwakhishwa nezeluleko zehora ngehora ezingaphezu kuka-30mm.
Umoya ubungomunye wabaphikisi besiphepho. Kwakunamandla amakhulu cishe kuyo yonke insimu, ayegqame entshonalanga nasenyakatho. Lezi zindawo bezinexwayiso elisezingeni lewolintshi elingaphezulu kwe-100 km / h. Ukuqhuma okuqine kakhulu kwenzeke ezintabeni eziphakeme, futhi isivinini somoya sawo sidlule ku-120 km / h ngoLwesibili ebusuku.
Imvula yokuqala ehlotshaniswa nalolu hlelo lwengcindezi ephansi ibivele ivele enyakatho ntshonalanga ekupheleni kwalo msombuluko. IGalicia, iphuzu elisentshonalanga kakhulu leCastilla y León, nezindawo ezinezintaba ze-Asturias ne-Extremadura kuzoba yizindawo lapho izimvula zizofika ngaphambili. Esibhakabhakeni esimpunga nezinsuku zemvula enamandla, ukwehla kwamazinga okushisa nomoya kwakha indawo engemnandi kakhulu.
Njengoba ukwazi ukubona, isiphepho uBarbara ungomunye walabo okuthi, ngaphandle kwesaziso esincane, baphule amarekhodi abalulekile. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngalesi siphepho nezimpawu zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Squall uBarbara